Sidee looga faa'iideysan karaa biyaha roobka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Nuria | | Dhaqaalaha Guriga, Hoyga Cagaaran, Dib u warshadaynta
Biyaha roobka waxay leeyihiin dhowr astaamood oo ka dhigaya mid ku habboon adeegsiga kala duwan ee guriga. Haddii aad ku nooshahay gobol ay roobab badani ka da'aan, waad ka faa'iideysan kartaa oo urursada Biyahaani in mar dambe la isticmaalo, waa ka fudud yihiin sida ay u muuqato, waxaad si fudud salka ugu ridi kartaa barxadda barxadda oo roobku u dayn karaa ama hagaajin karaa nidaamka lana ururiyo biyaha roobka ee ka yimaada saqafka gurigaaga.
Biyaha roobka ee ku dhaca saqafkaaga ayaa la marin karaa biyo mareenada loogu talagalay weel daboolan si ay Agua wasakh ha noqon, kaliya ka tag daloolka si uu uga soo dhaco majaarka. Biyaha waxay gaarayaan taangi la soo bandhigi karo ama la aasi karo, oo ka sameysan shub ama caag ama qurxin waxayna awooddeeda ku xiran tahay isticmaalka aad siin doontid iyo xaddiga roobka inta badan ka da'a magaaladaada. Waa lagama maarmaan in la dhigo a filter Si ay uga koobnaadaan caleemaha iyo haraaga kale ee adag iyo shaandhada kale waa inay ka hortagtaa soo gelitaanka xoolaha.
Mar uun dhigasho waa inaad abuurtaa shabakad si loogu qaybiyo meelaha guriga aad ugu baahan tahay. Waa inay u noqotaa mid kheyraad dhameystiran u ah shabakadda asalka ah ee asalka ah laakiin waa inaan la isku darin. Marka biyaha ku jira taangiga ay dhammaadaan, shiditaan ayaa u oggolaan doona biyaha shabakadda caadiga ah inay wareegaan. Naqshadeynta shabakadda biyaha roobka waxaa loogu talagalay meelaha guriga ku yaal ee aad rabto inaad uga faa'iideysato, waxaa ku wadi kara a bomba. Waxaa jira shirkado iibiya oo rakibaya qalabkan ama adigu waad sameyn kartaa adigu haddii aad aqoon u leedahay tuubbada.
Biyahan waa nadiif, bilaash, lime la'aan, iyo uruurintu kuma lug laha kharashyo buun buunin ah. Isticmaalkeeda waxaa badanaa loogu talagalay inodoro, makiinada dharka lagu dhaqo, makiinada dharka dhaqda, biyaha lagu dabaasho, nadiifinta ee guriga iyo in la sameeyo ka our beeraha (dhirta iyo geedaha) iyo beero reerka noqo waara.
Gobollada sida Galicia oo inta badan roobabku si joogto ah uga da'ayaan, qoysas badan ayaa ku rakibay guryahooda nidaamyo dib-u-warshadaynta biyaha roobka, iyagoo ku guulaystay keydkii 50 boqolkiiba biyaha la cabi karo, faa iido labadaba dhaqaalaha gudaha iyo kan deegaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Dhaqaalaha Guriga » Sidee looga faa'iideysan karaa biyaha roobka
Waxaan xiiseynayaa sida loo sameeyo miiraha biyaha roobka ugu horeeya
Sida microwave loo isticmaalo loona keydiyo tamarta